Kachin Baptist Convention မှ General Secretary Rev.Dr. Hkalam Samson နှင့်တွေ့ဆုံုခြင်း | Mizzima Myanmar News and Insight
Kachin Baptist Convention မှ General Secretary Rev.Dr. Hkalam Samson နှင့်တွေ့ဆုံုခြင်း
Dr. Hkalam Samson သည် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA နှင့် မြန်မာအစိုုးရ စစ်တပ်ကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးတွင် အရေးပါသော ပုုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သြဇာအာဏာရှိ ကချင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စစ်ဘေးရှောင် ဒုုက္ခသည် အရေးကိုုတွေကိုုလည်း ဦးဆောင် လုုပ်ဆောင် နေသူတစ်ဦးဖြစ်သလိုု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည်နှင့်လည်း ငြိမ်းချမ်းကိစ္စများ ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။
မေး။ ။ ယခင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည် အစိုုးရမဖြစ်ခင် ဦးသိန်းစိန်သမ္မတလက်ထက်မှာ ပေါ့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည်က တိုုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုုင် ခေါင်းဆောင်တွေကိုု NCA လက်မှတ်ထိုုးတာ အရင်မလိုုဖိုု့၊ မလောဖို့ ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခုု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည်အစိုုးရ တက်လာတဲ့နောက်ပိုုင်းမှာ NCA လက်မှတ်ကိုု မြန်မြန်ထိုုးကြဖို့ တိုက်တွန်းနေတာ တွေ့ရတယ်၊ အဲဒီပေါ်မှာဆရာ့အနေနဲ့ဘယ်လိုုမြင်လဲဗျ။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်ကတော့ ခုုနက ပြောတဲ့အတိုုင်းပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည်အပေါ်မှာ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ထားခဲ့တဲ့ ဥစ္စာတွေက နည်းနည်းဝေးသွားတယ်လိုု့ ခံစားရတယ်။ ခုုနအချက်လည်းပါတယ်ပေါ့၊ မလောဖို့ဆိုုတာနော၊ အဲဒါတွေလည်းပြောတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တိုု့ဒီမှာ သူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ အဲဒါပဲအဓိကဆိုုတာ ပြောတယ်။ ဆိုုတော့ ကျွန်တော်ထင်တယ် ။ သူ တပ်မတော်ကိုု ပူးပေါင်းတဲ့နေရာမှာ သိပ်များ လိုုတာထက်ပိုု သွားမလားပေါ့။ အဲဒီလိုုတော့ ကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်။ ဆိုုတော့ အမှန်ဆိုု သူက ပြည်သူဘက်ကရပ်တည်ပြီးမှ တိုုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အရေးကိုု သူကနေမှ ပိုုပြီးတော့ ပြောရမယ် ။ ဒီကိစ္စတွေမှာ ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ ဒီမိုုကရေစီ ပီပြင်ဖိုု့ကိုု သူပိုုပြီးမှ အားသန်သွား တယ်လိုု့ ကျွန်တော် ထင်မြင်ယူဆတာပေါ့။
မေး။ ။ လောလောဆယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည်အစိုုးရဟာ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ နိုုင်ငံရေးတွေ ပိုုမိုုပူးပေါင်းလာတာတွေ့ရတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ဆရာဘယ်လိုထင်လဲ။
ဖြေ။ ။ သူတိုု့ရဲ့ကြားထဲမှာ တော်တော်နက်နက်နဲနဲ ဟိုုခံယူထားတဲ့ အရာတစ်ခုုခုုတော့ ရှိနေတယ်လိုု့တော့ ကျွန်တော်တိုု့ခံစားမိတယ်။ Agreement ပုံုစံပေါ့။ တစ်ခုုခုုတော့ ရှိမယ်လိုု့ ခံစားရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုုတော့ ခုုနကပြောတဲ့အတိုုင်းပဲ။ ကျွန်တော်တိုု့က သူတိုု့နဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ၁၇/၁ ကိစ္စတွေပြောတယ် ၊ တပ်မတော် ထိုုးစစ်ကိစ္စတွေ ပြောတော့ ဒါဟာ တပ်မတော်က သူရဲ့လုုံခြံုရေးအရ လုုပ်နေတဲ့ကိစ္စလိုု့ပြောလာတယ် ဆိုုတော့ ဟိုုကျွန်တော်တိုု့ဘက်ကတော့ အဲဒါတွေပေါ့နော် ၊နားမလည်နိုုင်တာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဆိုုတော့ သိပ်ပြီးမှ ပါဝင်မှုကတော့ အခုုဒီ ရခိုုင်အရေးမှာလည်း ကြည့်မယ် ဆိုုရင်လည်း ကျွန်တော်တိုု့အဲဒီလိုုပဲ တွေ့ရတာပဲ။ အင်တာနေရှင်နယ် အနေနဲ့ကြည့်မယ် ဆိုုရင်တော့ ဒါသူ့အပေါ်မှာ ခုုနကပြောတဲ့အတိုုင်း ဒီပေးခဲ့တဲ့ ဆုုတွေတောင်မှ ပြန် ရုုတ်သိမ်းတယ်ဆိုုတာ အင်တာနေရှင်နယ်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတော့ လူသားကိုု ဦးစားပေး ဖို့ပေါ့နော်၊ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ သူ့ရဲ့ဆုံုးဖြတ်ချက်က တော်တော့်ကိုု တပ်မတော်နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးမှ ဆောင်ရွက်နေတာဆိုုတာ ထင်ရှားတဲ့အရာတွေ မြင်မိတယ်ပေါ့၊
မေး။ ။ အဲဒီတော့ အခုုခေတ်စားနေတာက ပင်လုံုညီလာခဲ့ပေါ့နော်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည် အနေနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မြင့်တဲ့ ရာထူးကိုု ရရှိထားသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်၊ အဲဒီတော့ ဒီပင်လုံုညီလာခဲ့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုမှာ အမျိုးသမီး ပါဝင်မှုကဏ္ဍက ဘယ်လောက်ထိ အရေးကြီးမယ်လိုု့ ဆရာထင်လဲ ။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်ကတော့ ပင်လုံုမှာ အမျိုးသမီး ပါဝင်တယ်ဆိုုတာထက် ဒီအားလုံုးရဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုု ပီပြင်ရေးကိုု ဖော်ဆောင်နိုုင်မယ့်သူတွေ ပါဝင်ရေးကတော့ ပိုုအရေးကြီးမယ်လိုု့ ထင်တယ်။ အဲ အောင်ဆန်းစုုကြည်အနေကလည်း သူက အမျိုးသမီးဖြစ်လိုု့ အမျိုးသမီးပါဝင်ခွင့်အရေးကိုု သူကတော့ အမြဲတမ်းတော့ ပြောတာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် သူပြောတဲ့အတိုုင်းပဲ အရည်အချင်းရှိပြီး ပါဝင်တာမျိုးပေါ့နော်၊ ဆိုုတော့ ဒီအမျိုးသမီး ပါဝင်ရေးကိုု ပါဝင်လည်း ပါဝင်စေချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ပါဝင်ရေးမှာ အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေ ပါဝင်ဖို့ လိုုပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ပါဝင်ရေးဆိုုတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုု အနေနဲ့ မဟုုတ်တဲ့သူတွေ၊ အရည်အချင်းမရှိတဲ့သူတွေ ပါဝင်လာတယ်ဆိုုတော့လည်း ပိုုစိုုးရိမ်ရတယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့်မိုု့လိုု့ ကျွန်တော့အနေနဲ့ ကတော့ ဒီပင်လုံုကတော့ အဓိက ခေတ်စားလာတယ်၊ ဒါပေမယ့် ၂၁ ရာစုုဆိုုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်အရပေါ့ ပြန်ပြီးမှ လွန်ခဲ့တဲ့ ဥစ္စာကိုု ပြန်မကောက်တော့ဘူးလားပေါ့၊ အဲဒါကိုု ပြန်မလှည့်တော့ဘူးလား၊ နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ဘူးဆိုုတဲ့ သူတိုု့စကားတွေရှိနေတော့ ၊ နောက်ကြောင်း ဆိုုတာ ဘာကိုုပြောလဲဆိုုတာ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်။ ကျွန်တော်တိုု့ တိုုင်းရင်းသားတွေ လိုုချင်တာကတော့ မျှော်မှန်းနေတာကတော့ မျှော်လင့်နေတာကတော့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုုကြီး ပီပြင်ဖိုု့အတွက် မျှော်လင့်တာပေါ့နော်၊ အဲဒီမှာ အမျိုးသမီး ပါဝင်ဖိုု့ကလည်း ကျွန်တော်တိုု့ မကန့်ကွက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် အရည်အချင်းရှိစွာနဲ့ ဖက်ဒရယ်ကိုု ပီပြင်အောင် ဆွဲဆောင်နိုုင်မယ့် ခေါင်းဆောင်တွေ ပါဝင်ရေးကိုု ကျွန်တော်တိုု့ က ပုုိပြီးမှ လိုုလားတယ်ဆိုုတာကိုု ပြောချင်ပါတယ်။
မေး။ ။ အဲဒီတော့ တိုုင်းရင်းသားတွေမှာ ဘာသာရေးအရ၊ ယဉ်ကျေးမှုအရ အမျိုးသမီး တွေ ဦးစားပေးမှုမှာ ကန့်ကွက်ခံရတယ်ပေါ့နော်၊ ဒါပေမယ့် KIA တိုု့လိုု တိုုင်းရင်းသားတပ် တွေမှာလည်း အမျိုးသမီးတွေ အသုံုးပြုနေတာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီတော့ အခုုလာမယ့် ပင်လုံုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဆရာတို့ ကချင်အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်လာဖို့အတွက် ဆရာတိုု့အနေနဲ့ ဘယ်လိုုပြင်ဆင်ထားတာရှိလဲဗျ။
ဖြေ။ ။ ခုုနက ကျွန်တော်တွေ့ရသလောက်၊ ပြင်ဆင်တဲ့ ဒီအယောက် တစ်ရာရွေးတဲ့ အထဲမှာ ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ အမျိုးသမီးက သုံုးဆယ်ကျော်လောက် ပါဝင်နေတာကိုု တွေ့ရတယ်။ ဆိုုတော့ ကျွန်တော်တိုု့က ဒီအရည်အချင်းရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေပါပဲ၊ အင်တာနေရှင်နယ် ပညာရပ်မှာလည်း၊ ရင့်ကျက်မှုပိုုင်းမှာလဲ သူတိုု့က ဒီ CSO လူတွေများတယ်၊ ပြီးတော့ ဒီလူထုုတွေမှာ၊ အစိုုးရလုုပ်ငန်းတွေမှာ လုုပ်ကိုုင်နေတဲ့ အတွေ့အကြံုရှိတဲ့သူတွေ ရှိနေတယ်ဆိုုတော့ ကျွန်တော်ထင်တယ် ဒီတခေါက် ဒီကေအိုုင်အိုုရဲ့ ပင်လုံုပါဝင်ရေးမှာ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ကိုုယ်စားလှယ် တစ်ရာမှာ အမျိုးသမီးရဲ့ ပါဝင်မှုကတော့ အချိုးကျတယ်လိုု့ကတော့ ကျွန်တော်ဒီလိုုပဲမြင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ အဲဒီတော့ နိုုင်ငံရေးဘက်ကြည့်ရင် အခုုလက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စစ်ဘေးရှောင် ဒုုက္ခသည်တွေရဲ့ ကဏ္ဍတွေကလည်း ပါတယ်ပေါ့နော်၊ အဲဒီတော့ အခုုစစ်ဘေးရှောင် ဒုုက္ခသည်တွေက သူတိုု့ရဲ့ နေရပ်ကိုု ပြန်ဖိုု့အတွက် အဟန့်အတားက ဘာတွေဖြစ်နေလဲ။
ဖြေ။ ။ အဟန့်အတားက ၊ တစ်ခုုက ကျွန်တော်တိုု့ ဒီကချင်အနေအထားကိုု ပြောမယ် ဆိုုရင်တော့၊ ကချင်အနေအထားပေါ့ ဒီတိုုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒီစစ်တပ်ကြောင့် သူတိုု့ က ပြေးနေရတယ်ဆိုုတော့ စစ်တပ်ရှိနေတယ်ဆိုုရင် ပြန်ဖိုု့ သူတိုု့ကြောက်ရွံ့မှုတွေများ တယ်။ ဆိုုတော့ ကျွန်တော်တိုု့လဲအမြဲတမ်းပြောတယ် ဒီစစ်တပ်က အဲဒီမှာ ဆုုတ်ခွာသွား ရင် ဒီနေ့သူတိုု့ ဆုုတ်ခွာသွားရင် နောက်နေ့ အဲဒီနေရာပြန်ဖိုု့အတွက် အားလုံုးက အဆင် သင့်ပဲ၊ ဆိုုတော့ အဟန့်အတားက တစ်ကတော့ ခုုနက ပြောတဲ့အတိုုင်း စစ်တပ်တွေရှိ မယ်ဆိုုရင် တိုုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာနိုုင်တယ်ဆိုုတဲ့ ကြောက်စိတ်၊ တိုုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ရင် ကချင်ဖြစ်တဲ့အတိုုင်းပဲ အားလုံုးက ဒုုက္ခရောက်နိုုင်တဲ့ဆိုုတဲ့ အသိစိတ်တွေ လွှမ်းမိုုးနေတော့ အဟန့်အတားက အဓိကဖြစ်နေတယ်ဆိုုတာ တွေ့ရတယ်။
မေး။ ။ အဲဒီတော့ ဒီစစ်ဘေးရှောင်ဒုုက္ခသည်တွေပေါ့နော် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ မိသားစုုစည်းစည်းလုံုးလုံုးနဲ့ နေရပ်ကိုု ဘေးကင်းစွာနဲ့ ဘယ်အချိန် ပြန်နိုုင်ကြမယ်လိုု့ ဆရာတိုု့ မျှော်လင့်လဲ။
ဖြေ။ ။ အဲ ကျွန်တော်တိုု့ကတော့ ခုုနကပြောတဲ့အတိုုင်းပဲ စစ်တပ်နဲ့ ကေအိုုင်အေရဲ့ Agreement တခုုခုုပေါ့၊ အပေါ်မှာ ခိုုင်မှာမှုရှိမယ်ဆိုုရင် ပြန်လိုု့ရမယ်လိုု့ အဲဒီလိုုပဲ ယုံုကြည် တယ်။ ဒုုတိယအချက်ကတော့ ဒီနိုုင်ငံရေး အောင်မြင်စွာ ဆွေးနွေးနိုုင်ခဲ့ပြီ ဆိုုရင်လည်း ဒါ အေးအေးဆေးဆေး ပြန်နိုုင်မယ်လိုု့ ဒီအချက် နှစ်ချက်ပေါ်မှာ ပိုုပြီးတော့ အားထားချင်တာ ပေါ့။ စားရေးသောက်ရေးကတော့ ကျွန်တော်တိုု့ ကချင်တွေအတွက်တော့ သိပ်ပြီးတော့မှ ပြဿနာမရှိဘူး၊ ဘာလိုု့လဲဆိုုတော့ ကျွန်တော်တိုု့မှာ လုုပ်စားမယ့်နေရာတွေ ရှာစားဖိုု့ နေရာတွေများတယ်ဆိုုတော့ ဒီစားရေးသောက်ရေး ကူညီတဲ့အပေါ်မှာဒီငွေပေါ်မှာ ဘတ်ဂျက်ပေါ်မှာ စိုုးရိမ်တာထက် ကျွန်တော်တိုု့ကတော့ ခုုနက ပြောတဲ့အတိုုင်းပဲ လုံုခြံုရေးတိုု့၊ ခုုနကပြောတဲ့အတိုုင်း နိုုင်ငံရေးအရ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတွေကိုု ပိုုပြီးမှ Focus ပိုုပြီးမှ လုုပ်ပါတယ်ဆိုုတာ ပြောချင်တယ်။
မေး။ ။ ဆိုုတော့ ကျွန်တော်တိုု့ စစ်တပ် နဲ့တိုုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုုင် ကဏ္ဍကိုု ခနဘေးဖယ်ကြည့်မယ်၊ အဲဒီတော့ ဒီငြိမ်းချမ်းရေး လုုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ဒီစစ်ရှောင်ဒုုက္ခသည်တွေ ပြန်မယ့်ကိစ္စမှာ ဒီလက်ရှိအစိုုးရဖြစ်ဖြစ်၊ နောင်တက်လာမယ့်အစိုုးရဖြစ်ဖြစ်၊ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒီလက်ရှိအစိုုးရအချိန်မှာ ဒီ Peace process ( ငြိမ်းချမ်းရေး ဆောင်ရွက်တဲ့ လုုပ်ငန်းစဉ်မှာ) ကျွန်တော်ထင်တယ် အားနည်းနေတယ်လိုု့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ အားနည်းတယ်ဆိုုတဲ့နေရာမှာ ဒီအခုု ကျွန်တော်တိုု့ ကချင်ဒေသမှာဆိုုရင် လုံုခြံုရေးအရ တော့ ဖြစ်မှာပေါ့နော၊ မငြိမ်းချမ်းသေးတော့ သူတိုု့ရဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုုးမှုကနည်းတယ်၊ ဆိုုတော့ နောက်တက်လာမယ့်အစိုုးရလည်း ဒီလိုုပဲ ဒီစစ်တပ်ရဲ့လွှမ်းမိုုးမှုအောက်မှာ ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုုရင်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးက ဝေးနေဦးမှာပဲ၊ ဆိုုတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဒီအစိုုးရနဲ့ လက်ရှိအစိုုးရလဲ ဥပဒေအရပေါ့နော၊ ဒီအစိုုးရရဲ့ရပ်တည်မှု ကိုု ခိုုင်မာစွာ ရပ်တည်ပြီးမှ အားလုံုးကိုု လွှမ်းမိုုးစေချင်တယ်၊ အစိုုးရလွှမ်းမိုုးမှပဲ၊ သြဇာ လွှမ်းမိုုးမှပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်လို့ရမယ်လိုု့ ကျွန်တော်ယုံုကြည်တယ်။ ပြဿနာ ပဋိပက္ခများလေ ငြိမ်းချမ်းရေးက ပိုုဝေးလေပဲ။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တိုု့ ပြည်သူလူထုုက လည်း ခုုနကပြောတဲ့အတိုုင်း ပဋိပက္ခတွေ ဝေးနိုုင်သလောက် ဝေးဖို့လည်း ကျွန်တော်တိုု့က အဲဒီလိုုမျှော်လင့်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ခုုနကပြောသလိုု ဖြစ်မလာဘူးပေါ့။
မေး။ ။ ဒီစစ်ဘေးရှောင်တော်တော်များများမှာပေါ့နော် အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေ အများဆုံုးတွေ့ရတယ်၊ ယောကျင်္ားလေးတွေကတော့ အပြင်မှာ ထွက်ပြီး အလုုပ်ထွက် လုုပ်ကြတယ်၊ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေက စခန်းထဲမှာ ရုုန်းကန်နေကြတယ်ပေါ့နော် ၊ အဲဒီတော့ ဒီစခန်းတွေထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကလေးတွေ ကြံုတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒီမိသားစုု နေရတဲ့အခန်းတွေ တွေ့မှာပေါ့၊ စုုပေါင်းနေထိုုင်တဲ့ ကျဉ်းကျဉ်း ကျပ်ကျပ်နဲ့ နေထိုုင်ရတဲ့ဒုုက္ခ၊ ဆိုုတော့ ကျွန်တော်တိုု့ကတော့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ဘိုု့ အမှန်တကယ်လိုု့မိမိနေရပ်ဒေသကိုု မပြန်နိုုင်သေးပဲ စခန်းပြန်လည်တည်ဆောက်မယ် ဆိုုရင် ကိုုယ့်အိမ်နဲ့ကိုုယ်ပေါ့နော်၊ တစ်အိမ်စီ နေဘိုု့အတွက်တော့ ကျွန်တော်တိုု့ ပိုုပြီးမှ ဦးစားပေးမှာပေါ့နော်၊ ဆိုုတော့ ခုုနကပြောတဲ့အတိုုင်း နေရာကျဉ်းကျပ်မှုတွေ၊ နောက်တခုု က ကလေးတွေ ကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာ၊ လူပျိုတွေ အပျိုတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ သူတိုု့ရဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေ နောက်ပြီးမှ တစ်ခုုက ဒီဝင်ငွေရဲ့အရ သူတိုု့က ထောက်ပံ့တဲ့ဥစ္စာ ကိုုပဲ စားနေရတယ်ဆိုုတော့ ဝင်ငွေအပိုုမရှိဘူး၊ ဆိုုတော့ ကလေးတွေရဲ့လိုုအပ်ချက်က များလာတယ်ဆိုုတော့ မိဘတွေကလည်း ပူပန်မှုတွေများလာတယ်၊ သူတိုု့ရဲ့ ဒီကျန်းမာ ရေး၊ ချို့တဲ့မှုတွေ၊ အခုုက ကျွန်တော်တိုု့ကတော့ အသက်ရှင်တာပဲရှိတာပေါ့ ဟိုုဖွံ့ဖြိုးမှု တော့ မရှိဘူးပေါ့၊ ဆိုုတော့ ဒီကျန်းမာရေးပိုုင်းမှာလည်း များတယ် ။ Social problem တွေကလည်း များတယ်၊ ဆိုုတော့ ကျွန်တော်တိုု့ရဲ့ စိုုးရိမ်မှုတွေကတော့ ဒါတွေပဲ။ ကြာရင် ကျွန်တော်တိုု့ကနေပြီးမှ ပိုုပြီးဆိုုးဝါးမှုတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ခုနက ကျွန်တော်တိုု့ ပြောတဲ့အတိုုင်း နေရပ်ပြန်နိုုင်ရေးကိုု စဉ်းစားဖို့ လိုုပြီဆိုုတာ သဘောပေါက်လို့ ညှိနှိုင်းနေ ကြတာပါ။
မေး။ ။ အခုုရရှိနေတဲ့ အဓိကအထောက်အပံ့တွေက ဘယ်ကနေ လာကြတာလဲ။
ဖြေ။ ။ အထူးအဖြစ်ကတော့ UN အဖွဲ့အစည်းတွေကပဲ။ UNOCHA တိုု့ UNHCR တိုု့ WFP တိုု့၊ အဓိက ဆန်ဆီဆားတိုု့ကတော့ WORLD FOOD ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့တိုု့၊ အဓိကကတော့ UN အဖွဲ့ကနေလာတယ်။
မေး။ ။ ကျွန်တော်တိုု့ နိုုင်ငံရေးဘက်ပြန်ကြည့်ကြမယ်ဆိုုရင် အရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည် မိန့်ခွန်းတော်တော်များများမှာ တရားဥပေဒေ စိုုးမိုုးရေး ဆိုုတဲ့ စကားလုံုး တော်တော်များများကြားရတယ်၊ ဒါပေမယ့့်နောက်ပိုုင်းမှာ တရားဥပဒေစိုုးမိုုးရေ ပျက်ပြားစေတဲ့ အမှုအမျိုးမျိုးပိုုများလာတယ်။ ဘာကြောင့်လိုု့ထင်လဲဗျ။
ဖြေ။ ။ အဲဒါက ကျွန်တော်ထင်တာ ဒီအစိုုးရက ခုုနကပြောတဲ့အတိုုင်းပဲ တကယ်တမ်း အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍတွေမှာ သူမထိန်းနိုုင်ဘူး၊ ပြည်ထဲရေးတိုု့၊ လုံုခြံုရေးတိုု့ ၊ စစ်တပ်တိုု့မှာ ခုနက ဒီဝန်ကြီးနေရာတွေပေးတဲ့နေရာမှာ စစ်တပ်က ယူထားတဲ့နေရာတွေများနေတယ်၊ အဓိကနေရာတွေဆိုုတော့ သူ တိုုက်ရိုုက် မလုုပ်နိုုင်ဘူး၊ ဆိုုတော့ ကျွန်တော် ထင်တာ ကတော့ပေါ့နော။ ဒီ ဟုုတ်ချင်မှာလည်းဟုုတ်မှာပေါ့နော်၊ ဒါပေမယ့် ဒီ ၂၀၂၀ မှာ ဒီအစိုုးရ က နာမည်ပျက်လေ ၂၀၂၀ မှာ သူရှုံးလေပဲ၊ ဆိုုတော့ တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေက ဒါတွေကိုု ပြန်ပြင်ဆင်နေသလားပေါ့နော၊ ဒါမေးခွန်းတော့ ဖြစ်မိတာပေါ့၊ ပိုုမများသင့်ရဘူးလေနော်၊ အခုုကပိုုများနေတယ်ဆိုုတော့ ဒါကစဉ်းစားစရာပဲ၊
မေး။ ။ နောက်ဆုံုးအနေနဲ့ မေးခွန်းထဲမှာ မပါတဲ့အရာတွေ ဘာများ ဖြည့်စွက်ချင်သေး လဲဗျ။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တိုု့ မြန်မာနိုုင်ငံရဲ့ အရေးဟာ ကျွန်တော်တိုု့ နားလည်တဲ့ တန်းတူ ရည်တူဆိုုတာ ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ လူသားအားလုံုး တန်းတူညီတူလိုု့ခံယူတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခုုခေါင်းဆောင်တွေပိုုင်းက နားလည်တဲ့ တန်းတူရည်တူဆိုုတာကတော့ မြန်မာလူမျိုးက တော့ အထူးတစ်နေရာမှာပေါ့၊ တိုုင်းရင်းသားတွေကတော့ ဒုုတိယအဆင့် တန်းတူညီတူ ဆိုုတာမျိုးဆိုုတာကျတော့ စစ်ဘက်ပဋိပက္ခ ဖြစ်နေဦးမှာပဲ၊ မြန်မာနိုုင်ငံရဲ့ အရေးဟာ ဒီမိုုကရေစီအရေးဆိုုတာထက် တိုုင်းရင်းသားအရေးလည်း ဖြစ်တယ်၊ ဆိုုတော့ တိုုင်းရင်းသားတွေရဲ့အပေါ်မှာ ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ မြန်မာပြည်သူများရဲ့ တန်းတူရည်တူ ပေါ့နော်၊ ဒီစိတ်ထဲမှာ အခွင့်အရေးပေးပြီးမှ သူတိုု့ရဲ့တိုုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေကိုု ကိုုယ့်ရဲ့ ကိုုယ်ပိုုင်အုုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ဆုံုးဖြတ်ပိုုင်ခွင့်နဲ့ မြန်မာပြည်ကြီး ပြည်ထောင်စုုရဲ့အောက်မှာ ကျွန်တော်တိုု့ သွားမယ်ဆိုုရင်တော့ ကျွန်တော်တိုု့ အေးချမ်းသာယာတဲ့ နိုုင်ငံတော်ကြီး တည်ဆောက်နိုုင်မယ်လိုု့ကျွန်တော် ဖြည့်စွက်ပြောချင်ပါတယ်။ ။
Dr. Hkalam Samson